Wednesday, December 19th, 2018 - 05:58:11
AC Milan oo dooneysa Kevin Mirallas
0 Wednesday December 02, 2015 - 16:51:55
AC Milan ayaa waxaa ay dooneysaa in ay lasoo saxiixato Everton weerarkeeda Kevin Mirallas oo la geyn doono San Siro bisha tan xigta ee January marka daaqadda kala gadashadu furanto.
Paul Pogba: Waan jeclahay magaalada Manchester, haddana waxaa joogaa halkaas, ma koox ayuu ku biirayaa?? "Sawirro"
0 Wednesday December 02, 2015 - 16:15:03
Paul Pogba ayaa tegay magaalada Manchester, habeenkii Talaadada wuxuuna booqday goob uu markii uu yaraa ka cunteyn jiray oo ah maqaayad ay koox Shiineys ah leeyihiin.
Man United: "Allegri waa tababaraheena ku xiga Van Gaal"
0 Wednesday December 02, 2015 - 15:41:43
Manchester United ayaa wararku sheegayaan in Massimiliano Allegri ay ku sheegtay tababaraha ku xiga Louis van Gaal.
QPR oo macallin ka dhiganeysa Laacib hore oo Chelsea ka tirsaa, waa kuma???
0 Wednesday December 02, 2015 - 15:39:27
Championship kooxda joogta ee Queens Park Rangers ayaa magacaabeysa Macallinkeeda cusub, wuxuuna noqon doonaa ciyaaryahan horay loogu qaddarin jiray Chelsea.
Xabi Alonso & Jaceylka uu u qabo ku laabashada Liverpool iyo Anfield
0 Wednesday December 02, 2015 - 15:39:22
Bayern Munich booskeeda dhexe Xabi Alonso ayaa sheegay in uu ku riyoodo in mar kale uu xirto funaanaddii Cassaanka aheyd ee Kooxda Liverpool oo uu muddo xirnaa.
Goorta uu garoomada kusoo laabanayo Koscielny oo la ogaaday
0 Wednesday December 02, 2015 - 10:43:55
(Kubadbile) Daafaca kooxda kubadda cagta Arsenal Laurent Koscielny ayaa la xaqiijiyay inuu garoomada dib ugu soo laaban doono dhawaan kaddib dhaawac kusoo gaaray horyaalka bilowgii toddobaadkan.
Miranda, Willian, Douglas Costa & Brazil Xiddigaheeda 2015 laguma heysto Adduunka "Sawirro"
0 Wednesday December 02, 2015 - 10:02:37
Sanadka dhammaadka ah, oo kaliya ay ka dhimmantahay December billowga ah ayaa waxaa la sheegay in Selecao uu yahay dalka ciyaartoyda u fiican Adduunka heysta.
Kulamada laga ciyaari doono Koobabka, Ligue 1, Capital One Cup, Copa Italia iyo Del Rey & Saacadaha la ciyaari doono
0 Wednesday December 02, 2015 - 09:58:19
Kulamo ka tirsan Tartamada Yurub ee kala duwan ayaa la ciyaari doonaa, waxaana laga kala dheeli doonaa Talyaaniga, Ingiriiska, Faransiiska iyo Isbeyn.
Gabdhaha Waaberi oo guul ka gaaray dhigood H/Wadaag Tartanka K/kolayga degmooyinka+sawirro
0 Wednesday December 02, 2015 - 09:52:09
(Kubadbile)-Iyadoo si xiiso leh oo garoonka wiish ugu socdo Tartanka kubbada kolayga wiilasha iyo gabdhaha degmooyinka Gobalka Banaadir ayaa shalay waxaa kulan xiiso badan ku ciyaaray gabdaha Waaberi iyo Howlwadaag oo ka mid ah degmooyinka ka qeyb galaya Tartanka
Liverpool oo qandaraas cusub ka saxiixaneysa goolhayaheeda
0 Wednesday December 02, 2015 - 09:51:17
(Kubadbile) Kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa furtay wadahadalo ay la sameyneyso goolhayaheeda Simon Mignolet si ay uga saxiixdo qandaraas cusub.
Atletic Madrid oo Janaury dib usoo celineysa wiilkeeda plka ku jahwareersan
0 Wednesday December 02, 2015 - 09:28:42
(Kubadbile) Kooxda Atletico Madrid ayaa qorsheyneysa inay Chelsea kala soo wareegto wiilkeedii hore Diego Costa oo xaalad adag iminka ku jira.
Xanta Suuqa: Man United oo raadineysa Aubameyang
0 Wednesday December 02, 2015 - 07:30:26
Louis van Gaal ayaa waxaa uu sheegay in kooxdiisa uu kusoo biirinayo Borussia Dortmund weerarkeeda, kaasoo dhaliyey 22 gool xagaagan.
Natiijooyinka kulamadii Xalay ee Capital One Cup
0 Wednesday December 02, 2015 - 07:30:06
Xalay kulamadii la ciyaaray ee Koobka Capital One Cup waxaa guulo gaaray Everton, Man City iyo Stoke.
Reus iyo Gundogan oo ku biiraya Liverpool
0 Wednesday December 02, 2015 - 07:10:27
Liverpool macallinka hoggaamiya Jurgen Klopp ayaa u taagay Leyrka cagaaran xiddigo ka tirsan, Dortmund kuwaas oo uu sheegayo in uu kasoo dhaqaajin doono doono Bundesliga geyn doonana Reds.
Chambers oo buuxin doona Booska dhexe ee Coquelin!!!
0 Wednesday December 02, 2015 - 07:10:21
Arsenal kooxda da'doodu ka yartahay 21-jirrada macallinka hoggaamiya Steve Gatting ayaa ciyaarsiiyay Booska dhexe ee difaaca caawiya laacibka Calum Chambers wuxuuna sheegay in aan la tebi doonin Francis Coquelin maqnaanshihiisa, markii uu si buuxda booskaas u maareeyay laacibku.
Daawo Sawirada Kaaraan iyo Howlwadaag oo kulanki ugu xiisaha badnaa tartanka kubada Koleyga degmooyinka ku kulmay
0 Tuesday December 01, 2015 - 22:59:28
(Kubadbile)-Waxaa galabta garoonka Wiish uu marti geliyay kulanki ugu xiisaha badnaa tartanka kubada kolega Wiilasha degmooyinka gobolka Banaadir tan iyo markii uu bilowday, waxaana isaga hor yimid Kaaraan iyo Howlwadaag.
0 Visits: 1318 | Tuesday December 01, 2015 - 22:46:26
Klopp: Waa wax iska caadi ah in Gerrard uu yimaado Liverpool
0 Tuesday December 01, 2015 - 17:37:06
Laacibkan oo ah 35-jir, wuxuu tababarka kooxda Liverpool galay markiisii u horreysay tan iyo LA Galaxy oo uu xagaagan billowgiisii ku biiray tababare Klopp ayaase sheegay in Anfield Gerrard in ay tahay wax iska caadi ah.
« Prev1 ... 620621622623624625626 ... 733Next »